အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks]
1 အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 21st November 2009, 10:22 am
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ crackme ဆော့ဖ်ဝဲလ် တော်တော်များများကို crack လုပ်ပြီး key တွေရှာ၊ keygen တွေရေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချို့ crackme တွေမှာ စည်းကမ်းချက်တွေရှိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ key တွေကို ရှာနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ မရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေမှာ key တွေကို ပြန်ဖော်ရမယ့်အစား patch လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ပါ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို crack လုပ်ရတာဟာ တကယ်တော့ အကျိုးသိပ်မရှိလှပါဘူး။ Cracking စွမ်းရည် တိုးတက်စေတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် cracking စွမ်းရည်လဲတိုးတက်စေဖို့၊ အများသူငှာတွေလဲ အကျိုးရှိနိုင်စေဖို့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ crack လုပ်ရာမှာတော့ ဘာစည်းကမ်းချက်၊ ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မထားရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ serial ပဲရှာရှာ၊ keygen ပဲရေးရေး၊ patch ဖိုင်ပဲ ဖန်တီးတီး၊ loader ပဲရေးရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို full version အနေနဲ့ ဘာကန့်သတ်ချက်မှမရှိဘဲ သုံးနိုင်ဖို့သာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုလိုတာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ Crack လုပ်ထားပြီးသား exe ဖိုင်၊ patch ဖိုင်တွေဆီကနေ crack လုပ်နည်းကို ကူးမချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Website တွေကနေ share ပေးထားတဲ့ Keygen/ serial/ crack/ patch ဖိုင်တွေကနေ idea မယူကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ရဲ့ cracking စွမ်းရည် တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော် ညွှန်ပြမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကတော့ FlyHelp ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ Engineering Power Tools တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုစလုံးကို ဘာ protector/packer နဲ့မှ protect/pack လုပ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို ရွေးချယ်ရတာကတော့ crack လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။
(၁) FlyHelp ကို [You must be registered and logged in to see this link.] မှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ FlyHelp ကို html ကနေ chm ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းပေးရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ လက်ရှိ version ကတော့ 6.7 ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ version 6.1 ကနေ 6.7 အထိ နှစ်သက်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုခုကို crack လုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Engineering Power Tools ကိုတော့ [You must be registered and logged in to see this link.] မှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သူကတော့ အင်ဂျင်နီယာပြသနာများ၊ သိပ္ပံပြသနာများ ဖြေရှင်းရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြသပါတယ်။ လက်ရှိ version ကတော့ 2.0.5 ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ၂၀၀၅ကတည်းက နောက်ထပ် version ထပ်ထွက်လာခြင်း မရှိပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ version 2.0.2 ကနေ 2.0.5 အထိ နှစ်သက်ရာ version တစ်ခုခုကို PLUS edition ဖြစ်အောင် crack လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Crack လုပ်ထားပြီးသား crack ဖိုင် (သို့) keygen ဖိုင် (သို့) loader ဖိုင် (သို့) patcher ဖိုင်ကို မူရင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် installation ဖိုင်နဲ့ တွဲတင်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဘယ်လို crack လုပ်လိုက်ကြောင်းကိုတော့ ကျူတိုရီရယ်ရေးပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီလိုရေးပေးလိုက်ရင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို နောက်လူတွေ crack မလုပ်ကြတော့မှာ စိုးလို့ပါ။
(မည်သူမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Cracker အချင်းချင်း ရင်းနှင်းခင်မင်မှု တိုးပွားပါစေ။)
2 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 23rd November 2009, 3:47 pm
အဲဒိ crack ကို ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗျ
ဘာ language နဲ့သုံးပြီးလုပ်ရလဲ
3 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 23rd November 2009, 4:27 pm
သျှန်ဝေ wrote: အဲဒိ crack ကို ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗျ
ဟိုက်... ကို rhythm က ခရက်လုပ်ခိုင်းထားတာလေ။ ဘယ်လိုခရက်ရလဲ ပြန်မေးနေတယ်။ ဒုက္ခ။
ဘာ Language သုံးပြီးမှ ခရက်စရာလိုပါဘူး။ ခရက်လုပ်တာ Language မှမလိုတာ။ Assembly နည်းနည်း ဖတ်တတ်ရင်ရပြီ။ Software အကုန်တော့ဟုတ်ဘူးနော်။ ဟီး
4 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 23rd November 2009, 6:57 pm
resource hacker တို့ resource turner တို့ dll file viewer တို့ လုပ်ရမှာလား
5 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 23rd November 2009, 7:07 pm
သျှန်ဝေ wrote: resource hacker တို့ resource turner တို့ dll file viewer တို့ လုပ်ရမှာလား
ဟုတ်ဘူး။ Cracker Guide 2.0 ကို အရင်ဖတ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါဆို ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ.။
6 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 23rd November 2009, 9:49 pm
အဲ စာအုပ်ပေးလေ ဆိုက်ကို ရဲ့
7 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 12:59 pm
ဘယ်သူမှလဲ မဖြေကြဘူးလား မသိဘူး။
Engineering Power Tools 2.0.x ရဲ့ patch ဖိုင်ကိုတော့ အောက်ပါ Link မှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Version 2.1-2.4 ထိတော့ စမ်းထားပါတယ်။
Installation ဖိုင်ကိုတော့ အောက်ပါလိပ်စာမှာ (သို့) Google မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
8 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 2:32 pm
ကို rhythm ရေ အားလုံးဖြေပြီး သွားရင် ဒီ software2ခု ကို ဘယ်လို crack လုပ် တယ် ဆိုတာ tutorial တင် ပေးပါအုံး
9 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 4:44 pm
အိမ်ကိုတော့ ဆော့ဝဲတွေ ဒေါင်းသွားပြီးပြီ။ အချိန်မရလို့ အဲဘက်မလှည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ဦး။ အချိန်ရရင် ကျနော်ရအောင်ဖြေပါဦးမယ်။ နောက်လည်း ဒါမျိုးတွေတွေ့ရင် ထပ်တင်ထားပေးပါနော်။ skill တက်တာပေါ့။
10 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 1:02 pm
Fly Help 6.1 Patch.rar
11 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 3:07 pm
12 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 5th December 2009, 5:22 pm
Cracking မှာ ဘာလုပ်တဲ့ဟာလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။
TuT တွေ ရေးချင်ရင်တော့ ရေးလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့။
## ကျနော်လည်း ခရက်မလုပ်တာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ##
13 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 13th December 2009, 10:26 am
FlyHelp 6.1 ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 6.7 ကတော့ 6.1 နဲ့ နည်းနည်းသာဆင်ပါတယ်။ Crack လုပ်ရတာ ပိုခက်မယ်ထင်ပါတယ်။
Fly Help 6.1 Setup File Part 1
Fly Help 6.1 Setup File Part 2
Fly Help 6.1 Setup File Part 3
တောင်ကြီးမှာ upload speed ကို 4Kbit/s ကန့်သတ်ထားလို့ ၃ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
(ဒီလိုပိတ်ပေးထားတဲ့ ပညာရှင်ကြီးများ အသက်ရှည်ကြပါစေ။ ဒါမှ ၀ဋ်လည်တဲ့ဒဏ်ကို ပြန်ခံစားရမှာ)
14 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks] on 15th April 2010, 1:55 pm
အဟီ့ .. ဆိုက်ကို ...cracking ကို logically ရှင် ပြ ပေး ပါ လား ..
ဘာ လုပ် တာ လဲ ... ကျွန်တော် သိ သလောက် ကတော့ .. hacking ဆို တာ က .. သူ ရဲ့ လျှို့ဝှက် စကား ကို မ သိ ပဲ နိုင် ပြောင်းနိုင် စွမ်းပဲ ရှိ တာ
Cracking ကတော့ .. သူ စကား ကို သိနိုင်စွမ်း ရှိတာ
ဟုတ် လား တော့ မ သိ ဘူး ... ရှင်းပြ ပေးနော် .. အောင် မ လေးး .. ၀မ်းသာ လိုက် တာ နော် .. နောင် ကြီးတို့နဲ့တွေ့ ရ တာ .. ဘ၀ လဲ ပြတ် .. အိပ် ရေးတွေ လဲ ပြတ် နဲ့.. နေ့နေ့ည ည ဒီအနောက် ပဲ လိုက် နေ မိ တေ့ တယ် အဟင့် [You must be registered and logged in to see this image.]
ဘ၀ပျက် သူ .. မြန်မာ လူ မျိုး
15 Re: အောက်ပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုကို crack လုပ်ကြည့်ပါ။ [Tips & Tricks]